Banijya News | वाणिज्य बैंकहरुको खुद नाफा ५५ अर्ब ७९ करोड, कुन बैंकको कति ? - Banijya News वाणिज्य बैंकहरुको खुद नाफा ५५ अर्ब ७९ करोड, कुन बैंकको कति ? - Banijya News
वाणिज्य बैंकहरुको खुद नाफा ५५ अर्ब ७९ करोड, कुन बैंकको कति ?
चालू आर्थिक वर्षको वैशाख महीनासम्ममा सञ्चालनमा रहेका २७ ओटा वाणिज्य बैंकले ५५ अर्ब ७९ करोड २८ लाख बराबर खुद नाफा कमाउन सफल भएका छन् । चालू आवको तेस्रो त्रैमास अर्थात् चैतसम्ममा बैंकहरूको यस्तो नाफा ५० अर्ब ७४ करोड गरेका थिए ।वैशाख महीनामा मात्रै वाणिज्य बैंकहरूले ५ अर्ब ५ करोड २८ लाख हाराहारीमा नाफा कमाएका छन् ।
सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकले गत आवको असार मसान्तमा ५४ अर्ब ३५ करोड ७ लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका थिए । जसमाचालु आवको बैशाख मसान्तसम्म आइपूग्दा १ अर्ब ४४ करोड २० लाख रुपैयाँ थप गरेको राष्ट्र बैंकद्वारा सार्वजनिक तथ्यांकले देखाएको छ ।
गत आवको असार मसान्तको तुलनामा चालु आवको बैशाख मसान्तसम्म आइपुग्दा १६ वटा वाणिज्य बैंकको नाफा वृद्धि भएको छ । तर, सो अवधिमा ११ वटा वाणिज्य बैंकको खुद नाफा असार मसान्तको तुलनामा चालु आवको बैशाख मसान्तका घटेको छ । चालु आवको बैशाख मसान्तसम्म बैंकहरुले आर्जन गरेको नाफाको वृद्धिदरलाई प्रतिशतको आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी नाफा वृद्धिदर प्रभु बैंकको रहेको छ ।
सबैभन्दा थोरै एनआइसी एशिया बैंकको नाफा भएको देखिन्छ । प्रभु बैंकले गत आवको असार मसान्तमा १ अर्ब ३६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । जसमा चालु आवको बैशाख मसान्तसम्म आइपुगदा ६७.६३ प्रतिशतले वृद्धि गरी २ अर्ब २९ करोड १४ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
त्यस्तै कुमारी बैंकले गत आवको असार मसान्तसम्म १ अर्ब २२ करोड ६५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । जुन चालु आवको बैशाख मसान्तसम्म आइपुग्दा ५९.६९ प्रतिशतले वृद्धि भएर १ अर्ब ९५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ कायम भएको छ ।
त्यसैगरी नेपाल बंगलादेश बैकले गत आवको असार मसान्तसम्म १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ खुद नाफा गरेको थियो । जसमा चालु आवको बैशाख मसान्तसम्म ४७.६४ प्रतिशतले थप गरी १ अर्ब ८३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ ।
एनआइसी एशिया बैंकले गत आवको असार मसान्तमा ३ अर्ब १२ करोड १४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेको थियो । जसमा चालु आवको बैशाख मसान्तसम्म आइपुग्दा ७.७२ प्रतिशतले वृद्धि गरी ३ अर्ब ३६ करोड २३ लाख रुपैयाँ पुर्याएको छ